Kulankii Baarlamaanka oo u baaqday Kooram la’aan. – Hornafrik Media Network
Kulankii Baarlamaanka ee la filayay in Maanta looga doodo Go’aan ka gaarista Xil Haynta Wasiir Cabdi Xoosh ayaa u baaqday Kooram la’aan. Waxaana la waayay Tiradda sharci ahaan uu ku furmi karo Kooramka Baarlamaanka.
Guddoonka Baarlamaanka ayaa kala diray Xildhibaanaddii yimid Kulanka, Waxaana ay u sheegeen inay dib ka soo wargalin doonaan waqtiga uu dhacayo Kulanka Baarlamaanka.
Xukuumadda Somalia oo xalay dhan ka waday Olole Hoteeladda Muqdisho ayaa la tuhunsan yahay markii ay xaqiiqsatay inaysan difaaci karin Wasiir Cabdi Xoosh inay ka shaqeeyeen inuusan qabsoomin Fadhiga Baarlamaanka. Waxayna 50 Xildhibaan oo ku afkaar ah u sheegeen inaysan xaadirin Fadhiga Baarlamaanka, iyadoo Xildhibaano badana ay Dalka dibadiisa ku maqan yihiin, taasoo ka dhigaysa in haddii 50 Xildhibaan aysan madasha tagin inuu baaqanayo Fadhigu.
Xildhibaanadda Baarlamaanka oo intooda badan yimid Xarunta Golaha Shacabka, balse tiro yar ay ka dhimaatay inuu Kooramku buuxsamo ayaa iyagoo caraysan ka dareeray Xarunta Golaha Shacabka. Waxaana socda Olole loogu yeerayo Xildhibaano ka maqan Dalka si uu u buuxsamo Kooramka Baarlamaanka.
Xiisadda u dhaxaysa Baarlamaanka iyo Xukuumadda ayaa cirka isku sii shareeraysa. Waxaana laga yaabaa Qalqalkan siyaasadeed inuu dhaawaco Geedi Socodka Dawladnimo ee Somalia.